Sonke siyazi ukuba uluhlu lwamaBrazil lubani, kodwa bambalwa abakuvayo kwi-TV yeTurkey. Ukuba awuqhelanga ne-"soapy" yefilimu yoshishini laseTurkey, sifuna ukukuxelela ngokukodwa malunga neemiboniso zeTV kunye nabalingisi beli lizwe ngokuqinisekileyo ukuhlawula ingqalelo yakho. Yaye ukuba iichungechunge zaseTurkish ziye zakuba zilungele "kuwe," uya kuba nomdla wokufunda okungakumbi malunga nabadlali.
Abadlali abanenkwenkwezi be-1001 ebusuku, i-biography
Inkwenkwezi eyaziwayo ye-Turkish cinema kunye ne-time-time model, eyaziwayo ngendima kaMekhamed (iqonga lomdlali) kwi-series "Gumush" (2005), yazalwa ngo-Oktobha 27, 1983 e-Adana, eTurkey. Ngokuqinisekileyo, kwakubonakala ngathi uTatlintuga kwiichungechunge ze-TV "iGumush" eyenza abantu bachukumise kakhulu ukuba bathanda iindidi zeli lizwe. Ngoko ke, sagqiba ekubeni singenanto yokuletha i-blonde eyamehlo eluhlaza okwesibhakabhaka iKivanch Tarlutu kuluhlu lwee-TV zeTurkey kunye nabadlali. Ngendlela, ngo-2002 umdlali we-model ufumana isihloko esithi "Umzekelo Omhle Wehlabathi". Abagxeki abaninzi baseTurkey nabangaphandle baqhathanisa umdlali weqela elidumile lebhola uDavid Beckham, ngokubhekiselele ekufananeni kwabo kwangaphandle.
Umdlali we-actor wazalwa ngo-Aprili 13, 1979, kwisixeko saseKonya (eTurkey). Ngomnyaka we-2003, umdlali wenkwenkwezi wayenenkqutyana kwiingqungquthela esithi "Uthando olungenakufa", kodwa ngenxa yokulinganisa okuphantsi kweloluhlu kufuneka kugqitywe kwi-11 yechungechunge. Emva koko, ngo-2004, ezimbini izikrini kunye nokuthatha inxaxheba kukaMurat kwavela kwizikrini: "Amanga amakhulu" kunye "Bonke abantwana bam". Eyona nto idume kakhulu ngumdlali weyona nxaxheba ephambili kwi-series "Storm" (2006). Enye indima "yeenkwenkwezi" ku-Murat yayisekhomputheni ethi "Asi", apho naye wadlala indima ephambili kunye nomdlali oyiTurkey Büyüküstün ongumTurkey. I-Yildirim okwangoku kwinqaku elithi "Uthando noKwahlwaya" kwaye luhlangene nolwalamano noBurchin Terziol.
Umhla wokuzalwa 16 uEpreli 1977, iBursa (iTurkey). Abadlali uJade baqala ngo-1995, bekhankanya kwi-series "IPalavra Ashklar." Kodwa ngo-1997, umdlali we-actress wathatha indawo ephakamileyo ephakamileyo kwi-mpikiswano yokuhlelwa yi-"Star". Ngo-2000, umdlali wesigqirha watshata noKaan Girgin, wamshiya umsebenzi wakhe okwenza ixesha elide. Ngo-2002, umtshato waqhekeka. Inxaxheba yokuqala emva kwekhefu yayiyinxalenye ebandakanyekayo kwiichungechunge ze-TV "iZalim", kunye ne-Mahsun Kirmyzygyul. Emva koko, uJade wadlala kwiichungechunge ezaziwa njengeTurkey njenge "Kasigga insanlary", "Power Bashtan", "Maki" kunye ne "Myn bir tun". Ngonyaka ka-2008, uJade Duvenci waba ngumfazi woshishino u-Engin Akgun.
Umhla wokuzalwa uAprili 30, 1970 Istanbul (Turkey). Ngenxa yokusebenza kwakhe ngo-1989, uHalit washiya i-faculty yokwakha iinqanawa kunye ne-oceanography kwi-Istanbul Technical University kwaye wajoyina isebe elisebenzayo. Okwangoku, ngaphandle kwemisebenzi kwi-cinema nakwinqanaba lezemidlalo, uErgench, njengabalingisi abaninzi, uzame njengemininzi yeeprogram, isuswa kwiintengiso nakwii-serials. Olu hlobo olunjenge-"1001 ubusuku" kunye nokuthatha inxaxheba kuye kwaphula zonke iirekhodi zeembono. Ngendlela, ngo-2006, uKhalit waba ngumnini weNqabileyo ye-Golden Butterfly umsebenzi wakhe kulolu chungechunge kwinqanaba elithi "I-Actor Male Best". Watshata nomdlali waseBergguezar Korel, kunye naye okhupha unyana odibeneyo ka-Ali.
Bergüzar Gökçe Corel
Umdlali waseTurkey wazalwa ngoSeptemba 2, 1982 e-Istanbul kwintsapho yabadlali abadumileyo uTanju Korel noHulia Darjan.
Izakhono zokwenza izinto uKorel wafundiswa kwisebe lezemidlalo kwiYunivesithi egama lingumakhi we-Sinan. Udlale iindima ezininzi kwiifilimu ezimfutshane kunye nakwiimboniso. UBerggueur wakwazi ukusebenza kunye notitshala wabantu abadumileyo njengoTom Hanks noNicole Kidman.
Intambo yokuqala yenzeke kwinqaku elincinci elithi "Broken Lives". Ngo-2005, uCorel wamenywa kwiingqungquthela zeTV "i-Olive Branch". Umdlali we-actress wathola impumelelo enkulu ngenxa yokudubula kwinqanaba elingaphambili lo-2006 "u-1001 ebusuku" (indima kaShehrazad Evliola). Ngaphambi kokuba uthathe inxaxheba kulolu chungechunge, uBerghuzar wathatha isifundo esivela kwi-famous artists at Ayla Algan. Ngendlela, le ngqungquthela yazisa uBerguzer "I-Golden Butterfly" ibhaso ekutyunjweni kwe "Best Actress". Ngo-2009, abalingisi bee-series "1001 Nights" uBerghuzar Korel noHalit Ergench babopha ngomtshato.
Yile ndlela abadlali abalungileyo baseTurkey abajonga ngayo, ababetha inkwenkwezi kwiinkomfa ze-TV eziyaziwayo eTurkey.
Umlingisi uPenelope Cruz
Udliwano-ndlebe no-Olga Budina
Ubomi bentsapho bukaDmitry Kharatyan
Iintlanzi Lindsay Lohan kunye noScarlett Johansson
Impilo yabantwana unyaka omnye
Awukwazi ukulahlekelwa ngokwesini kunye nobufazi emva kokuzalwa komntwana
Indlela yokusebenzisa ukhilimu womntu
Indlela yokufunda ukuvuka ekuseni
Ukuphuhliswa kwabantwana emva kweenyanga ezili-6
Ukutyunjwa kweJapan: ubuchule kunye nobuchule bokusebenza
Impawu zokuqala zeAIDS
Kunokuba uphathe ukushisa kwelanga?
Isaladi enonophelo kunye neempilweni nge saladi ye-rocket
Umgudu wakho ophilileyo: ukhuseleko kwimpilo kunye nonyango lwezigulane
Isobho nge avocado